जब प्राणप्रिय पतिलाई आफ्नै श्रीमतीले रातो बाकसमा हालेर नेपाल पठाइन, त्यसपछि के भयो ? — Sanchar Kendra
जब प्राणप्रिय पतिलाई आफ्नै श्रीमतीले रातो बाकसमा हालेर नेपाल पठाइन, त्यसपछि के भयो ?
काठमाडौँ । त्रिभुवन विमानस्थलमा आइतबार थाइ एयरमा आउने आफन्तलाई कुर्नेको भीडको कुनामा दुई दाजुभाई कुरा गर्दै थिए । घरीघरी आगमनतर्फको प्रतिक्षालयमा झुण्ड्याइएको मोनिटरमा विमानस्थलमा अवतरण भएको विमानको लिस्ट हेरिरहन्थे । त्यतिबेला मलेसिया र दुबईबाट आउने यात्रुको लाम थियो ।
सवा १ बजे विमानस्थलमा थाइ एयर अवतरण भयो। दोलखा भिमेश्वर नगरपालिका-२ का गम्भीर र शिव श्रेष्ठ थाइ एयरलाई कुरिरहेका थिए। यही एयरमा उनका ३२ वर्षीय भाइ राजुको शव बाकसमा आउँदै थियो । चार दिन अगाडि उनको कार दुर्घटनामा मृ’त्यु भएको थियो।
विमानस्थल पुग्नु भन्दा अघि भाइको लागि चिता पशुपतिमा तयार परिएको थियो।छोराको अन्तिम पटक अनुहार हेर्न ६६ वर्षीया आमा अमलापुरी श्रेष्ठ र ७३ वर्षीय बुवा विष्णुप्रसाद श्रेष्ठ दोलखाबाट चारदिन अघि नै काठमाडौं आइसकेका थिए। कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ ।
छोराको शव राखेको बाकस घाटमा पुर्‍याउने बित्तिकै आमा अमलापुरी सम्हालिन सकिनन्। ‘छोरा बैशाखमा बुहारी र नाति लिएर आउँछु भनेर फोन गरेको थियो,’ उनले भनिन्, ‘बाकसमा पो आयो।’
मृतकका भिनाजु श्रवणकुमार श्रेष्ठ र श्रीमती सीता राईले राजुको शव बाकसमा हालेर नेपाल पठाए। तर, पशुपति आर्यघाटमा अन्तिम संस्कार हुँदा श्रीमती र छोरा आरब भने आउन सकेनन्। सीता म्यानमारकी हुन्। उनले चाहेर पनि श्रीमानको दाहसंस्कारमा आउन सकिनन्।
उनको १५ महिने छोरासहित श्रीमतीलाई आउँदो बैशाखमा स्वदेश फर्कने फोनमा आमा र आफन्तलाई सुनाएका थिए। उनको भक्तपुरको झौखेलमा साढे तीन तले घर बन्दैछ। ‘बैशाखमा घर सर्ने गरी बुहारी लिएर आउने भनेका थिए,’ दाई गम्भीरले भने,‘हतार हतार गरेर घर निर्माण भइरहेको थियो। उनीहरु सबै आउने कुराले हामी पनि खुसी थियौ। त्यस अघि उनको शव आइपुग्यो।’ तीन वर्षअघि झौखेलको किनेको जग्गामा गम्भीरले नै एक करोड खर्चेर घर बनाइरहेका थिए।
राजुको मृत्युपछि म्यानमार माइती भएकी बुहारी र डेढ वर्षीय भतिजलाई स्वदेश कसरी ल्याउने भन्ने यो परिवारमा अर्को चिन्ता छ। अर्को मुलुककी बुहारीलाई किरिया बसेको ठाउँमा राख्न समेत नपाएकोमा दुःखी रहेको उनले बताए। उता कुवेतमा नेपाल फर्किन ठिक्क परेकी नेपाली चेलीको मृ’ त्यु भएको छ ।
मृ’ त्यु हुनेमा घरेलु कामदारका रुपमा कार्यरत मोरङ, लेङटाङकी कुमारी राजवंशी रहेकी छन् । रोजगारीका लागि कुवेत गएकी उनको बिहीवार बिहान उपचारको क्रममा अस्पतालमा मृ’ त्यु भएको बताइएको छ । सुरुमा हाउसमेडमा आएकी उनी पछिल्लो समय गैरकानुनी रुपमा अन्यत्र काम गर्थिन् । अवैधानिक भएकोले उनी पछिल्लो समय डिपोर्टेशन मार्फत घर फर्कन आप्रवासी सेल्टरमा थिइन् ।
सेल्टरमै भएको बेला उनी गत नोभेम्बर ५ तारिखका दिन एक्कासी बेहोस भएपछि उनको उपचारका क्रममा ज्या’ न गएको हो । चेकजाँच गर्दा मृगौला, पिसाब र छातीमा समस्या देखिएको थियो । उनी केही दिनमा नेपाल फर्कने तयारीमा रहेको बताइएको छ । सांकेतिक तस्वीर : गुगलबाट